China KingKong 3 Tattoo Cartridge Machine Manamboatra sy Factory | MOLONG
Môtô alemanina tsy manan-kery
Hafainganana mihodina: 12V 11000rpm
Torio lehibe 480
AIR FREIGHT: Ny fomba tsara indrindra fandefasana entana mavesatra antonony (mihoatra ny 100kg) na rehefa tsy afaka miandry ny fitaterana an-dranomasina ny fizotranao. Miorina amin'ny lanjany sy ny habetsany ny tahan'ny entana entina amin'ny rivotra. Ny entana sasany toy ny foam dia maka habaka betsaka nefa maivana ary ny entana sasany toy ny vy dia mavesatra be nefa kely ny toerana. Ny vidin'ny fandefasana entana marina dia mitaky lanjany sy ny habetsany ary ho dinihina. Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fitaterana dia tsy mihoatra ny 10 andro fiasana ary matetika dia 3-5 andro fotsiny. (Azafady azafady fa ny zotram-piaramanidina dia fandefasana fotsiny any amin'ny seranam-piaramanidina akaiky anao indrindra. Ny mpiasan'ny entanao dia mbola mila mitantana ny fadin-tseranana sy ny fitaterana an-tanety mankany amin'ny trano fitahirizanao). Ny Air Waybill (AWB) dia porofo fanadihadiana momba ny fifanarahana teo amin'ny EM sy ny mpitatitra. Ny AWB dia halefa miaraka amin'ny entana entin'ny rivotra ary ho toy ny tapakila fandefasana, endrika faktiora, taratasy fanamarinana fiantohana ary antontan-taratasy ilaina amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana.
SEA FREIGHT: ny fomba fandefasana entana lafo vidy indrindra sy lehibe ho an'ny orinasa manondrana sy manondrana eran-tany. Azontsika atao ny mandamina ny fandefasana avy any amin'ny ozinina anay, avy any Shanghai seranan-tsambo akaiky indrindra, hatrany amin'ny seranan-tsambo akaiky anao indrindra, na hatrany amin'ny fotodrafitrasao (tsy misy ny haba sy haba). Afaka mandefa entana feno kaontenera feno (FCL) isika na latsaky ny entana feno fitoerany (LCL). Ny tahan'ny ho an'ny kaontenera 40 ′ dia eo amin'ny 50% fotsiny mihoatra ny kaontenera 20 'ary ny 40' HQ dia sahala amin'ny vidiny amin'ny fitoeran'ny 40 'GP. Ny entana mavesatra dia manodidina ny 20 taonina. Ny masoivohon'ny varotra dia afaka manoro hevitra anao amin'ny toro-hevitra momba ny fandefasana. Ohatra, raha latsaky ny 8cmb ianao dia hanoro anao izahay handefasana LCL fotsiny. Raha mihoatra ny 15cbm ianao dia mety mieritreritra ny hividy bebe kokoa hamoahana fitoerany feno satria ny fomba mora indrindra dia ny mandefa FCL ihany. Ny lanjan'ny lanja farany ambany indrindra ho an'ny LCL dia 1 cbm na 1 taonina, noho izany ho an'ny baiko ambanin'ny 100kg dia mety hanome soso-kevitra amin'ny fandefasana rivotra na koa ny fandefasana entana.
Somary miadana ny fitaterana an-dranomasina ka ny fandaminana tsara no ilaina. Manoro hevitra izahay ny hametraka baiko 3 volana mialoha. Ohatra. Raha mila vonona ny entanao amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy ianao dia aleo aorina amin'ny volana Aogositra na alohan'izay. Azonao atao koa ny mizara roa ny fandefasana anao: ampahany kely amin'ny rivotra, fitsaharana amoron-dranomasina.
Ny fanadiovana sy ny fakana na ny fanaterana ny kaomandinao dia azon'ny mpividy na mpivarotra ladoany. Tsy ho azonao atao ny mametraka antontan-taratasy firaketana amin'ny ladoany, mandamina ny fandoavana ny haba, ny haba ary ny sarany hafa. Miankina amin'ny firenena, mety ho sarotra; noho izany dia soso-kevitra izahay hampiasa broker manokana ho fanampiana. Izahay dia hanome anao Bill of Lading, Invoice, Certificate of Origin, ary Packing List. Hamarino hatrany raha te hahalala fa feno sy marina ny fampahalalana ary ampitao amin'ny mpivarotra fadin-tseroa haingana araka izay tratra.
Previous: Torohevitra azo ampiasaina amin'ny plastika fotsy
Manaraka: Fiatoana avo lenta azo haorina amin'ny tanana
HELLO II Penina Tatoa bateria Lithium
Blank Fampiofanana maharitra makiazy maharitra 290 * 195 * 3M ...
Fitoeran'ny tompon'ny kaopy mihazona tena